कसरी लेजर कपाल हटाउने उद्योग को अनुहार कपाल हटाउन को लागी - समाचार शेन्ज़ेन कुनै शक्त स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
कसरी लेजर कपाल हटाउने को साथ अनुहार कपाल हटाउने
समय: 2019-11-21 हिट्स: 4
यदि तपाईं केहि धेरै स्थायी चाहनुहुन्छ भने, तपाईं लेजर कपाल हटाउन कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई गहन नाडी प्रकाश उपचार पनि भनिन्छ।
डा। कृष्णन भन्छन्, "लेजरहरूले प्रकाशको निश्चित तरंगदैर्मा गोली दिन्छ जुन विशेष गरी कपालको फुल द्वारा आफैमा समाहित हुन्छ," डा कृष्णन भन्छन्। जब त्यो प्रकाश अवशोषित हुन्छ, यो तातोमा रूपान्तरण हुन्छ जसले कपालको फोलिकललाई मार्दछ। यस मार्गको इलेक्ट्रोलाइसिसको फाइदा भनेको एक समयमा ठूलो अंशको उपचार गर्दैछ, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिसले व्यक्तिगत रूपमा एक पटकमा एक फोलिकोला बिछ्याईरहेको छ - प्लक्सिंग बनाम मोमिंग सोच्नुहोस्। डाउनसाइडहरू: यो प्रकाश वा राम्रो कपाल भएका व्यक्तिहरूको लागि आदर्श मार्ग होईन, र लागत अधिक छ, सत्रहरू $ to० देखि $ 50 सम्ममा। यसका साथै फोलिकल्सलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न तपाईंलाई धेरै सत्रहरूको आवश्यक पर्दछ। यो ब्यूटी सैलुनमा कपाल हटाउने अवस्था हो।
यदि तपाईं केही स्टीकर-सदमा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ अर्को विकल्प छ: एक घरमा लेजर। जब तपाईं अधिक अग्रिम भुक्तानी गर्नुहुन्छ, तपाईं सत्र आफ्नै घरमा अनुसूचीमा गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले मात्र एक पटक उपकरणमा लगानी गर्नुपर्नेछ। हाम्रो सौन्दर्य प्रयोगशाला विज्ञहरूले M2 कपाल हटाउने प्रणालीको सिफारिस गर्छन्। यसले गहन स्पन्दित प्रकाश र छालाको कायाकल्प उर्जाको संयोजनको उपयोग गर्दछ राम्रो केश को लागि निक्सलाई।
कालो र गहिरो खैरो छाला बाहेक अन्य घर-लेजर कपाल हटाउने उपकरणहरू जस्तो, जुन धेरै छाला र कपालको लागि प्रभावकारी छ। यसको मतलब यसले धेरै व्यक्तिहरूको लागि काम गर्दछ तिनीहरूको अनुहार र शरीरमा स्थायी परिणामहरू खोज्दै। हाम्रो सौन्दर्य वैज्ञानिकले टिप्पणी गरे कि कपाल फेरि बढ्छ केवल once एक पटक साप्ताहिक प्रयोगको पछि। अझ राम्राे? यो परम्परागत लेजरहरू भन्दा कम पीडादायी छ।
अधिक जानकारी प्राप्त गर्न तलको लिंक जाँच गर्नुहोस्।
अघिल्लो: आईपीएल कपाल हटाउन कसरी काम गर्दछ? तपाईंको उत्तर यहाँ छ।
अर्को: घरको बारेमा प्रश्नहरू आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण II भाग २ use